Lohamasinina vaovao – FCE: tsy misy intsony izao ny famindrana entana | NewsMada
Lohamasinina vaovao – FCE: tsy misy intsony izao ny famindrana entana
Par Taratra sur 26/05/2021
Efa miasa izao ny lohamasinina vaovao amin’ny FCE mitondra entana. Tsy misy intsony amin’iny zotra iny ny famindrana entana (transbordement), indrindra rehefa miakatra avy any Manakara sy amin’izay tanàna ivoahan’ny vokatra maro, mankany Fianarantsoa. Misy tanàna 17, samy mamokatra daholo, andalovan’ny fiarandalamby FCE 163 km. Anisan’ny vokatra ny akondro, ny kafe, ny vary, sns.
Maneho ny fahafaham-pony ny tantsaha, satria mihena ny masonkarena nialan’ny karama amin’ny fitaomana entana namindrana izany tamin’ny fiarandalamby hafa. Manova betsaka ny fiainan’ny mponina any amin’iny faritra izany no hampitombo ny vokatra. Ny FCE hatramin’izay ny zotra tokana afahana mamoaka entana amin’ireo tanàna mampifandray an’i Fianarantsoa sy Manakara. Misy amin’ireo tantsaha mpamboly mihitsy no mitondra ny vokatra hatrany Fianarantsoa na Manakara, miala amin’ny fanararaotan’ny sasany.
Amin’izao aloha, sady mitondra mpandeha no mitondra entana ny lohamasinina vaovao, fa mbola hosarahina izany ao aoriana kely. Zotra iray lehibe ho an’ny mpandeha sy miantoka ny fizahantany koa ny FCE.